06 Dec, 2019 - 00:12	 2019-12-05T15:01:34+00:00 2019-12-06T00:00:12+00:00 0 Views
MAKADII? Ndiri musikana ane makore 23, ndinoda mukomana ane makore 23 – 35. Nhare yangu 0784 583 483.
Makadii? Ini ndiri mudzimai ane makore 40 ndodawo murume wekuchengetana naye ane makore 45 zvichienda mberi. Ndiri pamushonga, andida ngaandibate 0779 370 633.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana anodawo musikana akanaka wekuwana. Nhamba dzangu idzi 0775 225 918.
Ndiri mukomana ane makore 31 uye ndinodawo mudzimai ane makore 23 kusvika 27 asiri pamushonga. Nhare yangu 0787 336 085.
Ndiri mukomana ane makore 23 ekuberekwa, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 21 ari negative. Ngaave ave kuda kuroorwa, ngaandibate pa0782 435 695.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25, ndine mwana 1 uye ndinoda murume anonamata Johane Masowe weChishanu anoshanda. Nhare yangu 0712 467 689.
Makadii? Ndiri murume ane makore 35, ndinotsvaga mukadzi wekuroora ari pachokadi anoda zvemba kwete zvechipfambi. Nhare yangu 0785 746 721.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 38 ndinotsvaga mudzimai kana musikana ane makore 34 zvichidzika anorevesa totaura pa0714 172 563.
Makadii? Ndiri murume ane makore 25, ndinotsvagawo mudzimai wekuvaka naye imba ane makore 20 kusvika 26. Ndinoshanda uye ndinobatika pa0771 347 186.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 40 nevana vaviri, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane mwana mumwe uye ane makore 30 zvichidzika. Nhare yangu 0734 060 002.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 45 ndotsvakawo shamwarirume yemakore 50 kusvika 60. Nhare yangu 0775 370 927.
Ndiri mudzimai ane makore 49, ndinodawo murume wekushamwaridzana naye. Ndiri pamushonga, nhare yangu 0771 928 620.
Ndiri mukadzi ane makore 35, ndotsvagawo murume wekufambidzana naye. Nhare yangu 0772 831 284.
Makadii? Ndotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 21 zvichidzika, ndiri mukomana ane makore 21. Andifarira nhare yangu 0785 703 648.
Ndiri murume ari pamushonga, ndine makore 55 uye ndinotsvagawo mukadzi anoda zveimba ane makore 43 – 48. Ndine vana vatatu uye ndiri murimi kuHurungwe. Vanoda ndibatei pa0774 841 749.
Ndotsvagawo mukadzi akatsvinda, mutsvuku, anogeza, ane mazirudo netsika wekuwadzana naye. Fonai kana kutumira sms pa0715 096 970.
Makadii hama? Ndiri murume ane makore 40 nevana 2, ndakafirwa nemukadzi. Ndinozvishandira mabasa emaoko uye ndogara muHarare. Ndoda ari serious munyaradzi wemoyo wangu nevana vangu. Ndobatika pa0715 610 483.
Ndiri murume ane makore 39, ndotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 36 kana ane mwana. Ndoshanda uye sms ndopindura, ndobatika pa0775 618 795.
Makasimba here? Ndiri mudzimai ari kutsvakawo murume wekufambidzana naye murudo. Ndine makore 36 okubarwa. Zvimwe tozotaura pa0771 747 615. Mazvita ndibatsireiwo.
Ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana uye ndotsvagawo murume. Nhamba dzangu 0786 110 367.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukadzi ane makore 24 nemwana 1, HIV negative uye ndodawo murume ane makore 28 – 33 ane mwana 1 kana 2. Ngaave anogara muHarare mutsvuku, murefu asina chirwere. Ndinobatika pa0718 178 122.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30, ndotsvagawo mukadzi wekuroora. Ndobatika pa0777 147 696.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 42, ndotsvaga murume ari pachokwadi ane makore 45 – 50 anoziva Mwari. Ndogara kuChitungwiza, nhare yangu 0733 144 533.
Makadii? Ndiri murume ane makore 46, ndodawo mukadzi ane makore 28 – 35 asiri pamushonga. Nhare yangu 0782 980 649.
Makadii? Ndotsvagawo mudzimai ane makore 28 – 35, ini ndine makore 46. Handisi pamushonga, nhare yangu 0782 980 649.
Makadini veKwayedza? Ndaneta nekunyorera tsamba yangu haisi kuverengwa, ndinodawo mudzimai wekugara naye mumba. Ngaave ane makore 20 kusvika 26. Nhamba dzangu idzi 0772 432 724.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, ndotsvagawo mukadzi ane rudo asina chirwere. lni handishande parizvino, andifarira zvandiri ndibate chero nguva pa0773 278 946.
Makadii zvenyu? Ndiri murume ane makore 44, HIV+ uye ndinotsvagawo mukadzi ari positive seni. Makore ake ngaave ari pakati pe25 – 30. Nhare yangu 0778 072 961.
Makadii? Ndinodawo mudzimai ari pamushonga anoshanda ane makore 25 – 37. Nhare yangu 0785 202 997.
Makadii Kwayedza? Ini ndiri murume ane makore 32 ekuberekwa, ndinotsvagawo mukadzi ane rudo anokudza murume wake ane makore 20 kusvika 28 asiri pamushonga. Ini handisi pamushonga, nhamba dzangu dzenhare 0776 077 579.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora akavimbika ane makore 20 – 22. Matsotsi kwete, nhamba dzangu 0778 323 817.
Makadii veKwayedza? Ini ndinofara, ndinonzi Tawanda ndine makore 23 uye ndotsvagawo musikana wekufambidzana naye asiri pamushonga. Andidawo nhamba dzangu 0714 340 459. Ndinoda ane makore 18 – 20 asina mwana, ndatenda.
Ndiri murume ane makore 56 uyewo ndakafirwa nemudzimai. Ndisanganiseiwo nemukadzi ane makore 46 kusvika 60 ari HIV positive seniwo. Handidi anonwa doro uye ngaave anoda zvemusha. Ndiri pamudyandigere, nhare yangu 0719 795 351.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukomana munaku, murefu mutsvuku uye ndinodawo musikana wekuroora ari pachokwadi, akavimbika ane makore 20 – 26. Nhamba dzangu 0713 550 001.
Ndinotsvakawo musikana ane makore 18 – 19, ini ndine 19. Ndiri paGreat Zimbabwe University, anoda ndibate pa0782 250 733.
Ndiri murume ane makore 48, ndodawo mukadzi wekuroora anogara muChi-town. Nhare yangu 0773 978 203.
Ndiri murume ane makore 33, ndinodawo mukadzi ane makore 18 kusvika 30. Ndinogara kwaMutare, kumusha kuWatsomba. Ndiri kudawo anogara Mutare, nhamba dzangu 0712 782 975.
Makadini? Ndanyorera ndanyorerazve ndishambadzeiwo. Ndiri murume ane makore 47, ndogara muHarare uye ndotsvagawo mudzimai wewanano. Ada ndibate pa0785 368 815, totaurirana zvizhinji.
Ndiri murume ane makore 36 nevana 2 ndotsvagawo mukadzi wekuroora. Ndiri kuChipinge, ari pachokwadi ngaandibate 0774 964 582.
Ndiri murume ane makore 38 nemwana mumwe chete. Ndinodawo mudzimai ari pachokwadi ane makore 35 zvichidzika. Ngaave ane vana vakewo uye ane rudo. Ndinoshanda saka ndinodawo anoshanda, anondibata pa0717 164 162.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45 ekuberekwa nevana vaviri. Ndinotsvaga mukadzi asiri pamushonga seni. Nhamba dzenhare 0717 673 677.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 35 nemwana 1 ndoda mukadzi kana musikana akavimbika ane mwana kana asina uye asiri pamushonga. Ari pachokwadi ngaandibate pa0712 560 529.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 45, ndinotsvagawo murume ane makore 47 kusvika 60. Ndiri positive uye ndoda akaita seni ari pachokwadi anoshanda. Anoda nezvangu ngaandibate pa0714 873 473.
Kwayedza makadii? Ndiri mukomana ane makore 31, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 18 kusvika 27 asina mwana nekuti ini handina. Andida ngaandibate pa0779 044 538.
Makadii? Ndiri murume ane makore 47, ndiri pamushonga uye ndotsvagawo mudzimai ari pamushongawo ane makore 45 zvichidzika. Zvizhinji tozotaura pa0778 382 349.
Makadii Kwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 37 nemwana 1, ndotsvagawo murume ane makore 41 kusvika 49. Ngaave anoda zvemusha asi vakaroora kwete. Nhamba dzangu idzo 0776 141 686.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 20 – 28 asiri pachirongwa. Ndine vana 2, nhare yangu 0787 463 347.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 42 nevana 4, ndinotsvagawo murume ane makore 45 kusvika 55 anoda imba uye asiri pamushonga nekuti handipowo. Ngaave anotya Mwari, ane rudo. Andida ngaandibate pa0719 430 009.
Vabiki vechirongwa ndanzwa nematsotsi anoda zvekutamba. Ndotsvaga mukadzi ane makore 20 – 32 ane mwana 1 kana asina. Ini ndine makore 37 nevana 3, ndoita mabasa emaoko uye ndogara kumusha. Nhare yangu 0712 020 810.
Ndiri murume ane makore 39, ndotsvagawo mukadzi ane makore 25 kusvika 36 kana ane mwana. Ndoshanda sms ndopindura, ndobatika pa0775 618 795.
Makadii? Ndiri murume ane makore 30, ndotsagawo mukadzi wekuroora. Ndobatika pa0777 147 696.
Makadii Ndiri mukadzi ane makore 42, ndotsvaga murume ari pachokwadi ane makore 45 – 50 anoziva mwari. Ndogara kuChitungwiza, nhare yangu 0733 144 533.